Umshini wokuqhumisa nezingxenye zezingxenye ezingasebenzi, abahlinzeki - Abakhiqizi baseChina bokuqola nezingxenye ezingasebenzi
Ukwehliswa kungenziwa ngqo ezitsheni ezihlukile noma kubhande lokuthutha.Roller elihambayo wadubula kuqhuma imishiniasetshenziselwa ukwehlisa nokuthola imininingwane, amashidi nokwenziwa kwamanga. Usebenzisa ama-cross conveyers, uhlelo lokuhambisa ama-roller lungaxhunyaniswa nezinyathelo zenqubo ngazinye, njengokuqhumisa, ukulondolozwa, ukusika kanye nokumba.
Imishini yokuqhuma yesitimela engaphezuluzilungele izinhlobonhlobo zezicelo. Izingcezu zomsebenzi zixhunywe ngesandla noma zibekwe phansi. Inqubo yokuqhumisa ingenziwa ngendlela ekahle ngokushintsha indlela ejikelezayo nangokukhishwa kwama-hanger phambi kwama-turbine.
I- ukuqhuma amasondo ikakhulu aqukethe lawula ikheji, izindwani, ukuvikela amapuleti, shaft enkulu, ukushaywa kwejubane elikhulu, isondo lebhande, ibhande, ukuqina kwensimbi nemoto kanye ne isisekelo sezimoto njll.
Uhlobo lwesiphanyeko umshini wokuqhuma ziphakathi kwezinhlobo eziguquguqukayo kakhulu zemishini yokuqhumisa. Zisetshenziselwa ukususa ukugqwala, isikali, isihlabathi kanye nama-burrs ezinhlotsheni eziningi zezingcezu zomsebenzi.Uhlobo lwesiphanyeko umshini wokuqhuma asetshenziselwa ukuqeda ukuqhumisa kwezingcezu zomsebenzi ezizwelayo noma okweqile komsebenzi wocezu lomsebenzi wokumboza okulandelayo.
Umklamo wokuqhuma kwe-tumble wamukelwa kabanzi njengenye yezinqubo zokuqhumisa eziphumelela kakhulu zokususa isikali, ukugqwala kanye nama-burrs ezingxenyeni zokukhiqiza ngobuningi. I-ukuwa komshini wokuqhumaIbhande lenjoloba elingenamkhawulo lizungezisa ngobumnene izingcezu zomsebenzi futhi ngokufanayo liziveze emfudlaneni olucasulayo sonke isikhathi sokuqhumisa.
Ku- Drum uhlobo shot kuqhuma umshini izingcezu zomsebenzi ezincane ziqhunyiswa njengezimpahla eziningi. Ngakho-ke zingasetshenziswa kulayini wokukhiqiza noma ekuhlelweni kokuma wedwa.